Xildhibaan Cali Mareexaan Oo Qado Sharaf U Sameeyay Ciyaartoyga Gobalka Togdheer iyo Masuuliyiintii la socotay | Salaan Media
Xildhibaan Cali Mareexaan Oo Qado Sharaf U Sameeyay Ciyaartoyga Gobalka Togdheer iyo Masuuliyiintii la socotay
Hargeysa (SM)-Xildhibaan Cili Mareexaan oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Wakiilada ee Somaliland ayaa shalay qado sharaf u sameeyay Ciyaartoyga Gobalka Togdheer ee ka soo qayb-galay Ciyaaraha Gobalada oo ka socda Caasimada Somaliland ee Magaaladda Hargeysa.
Munaasibadan Qadasharafta ahayd oo lagu qabtay Huteelka Sumar time ee Magaalada Hargeysa, ayaa waxa ka soo qayb-galay Wasiirka Wasaaradda Duulista, Hawada iyo gadiidka Cirka ee Somaliland Md. Maxamed Xaashi Cabdi, Badhasaabka Gobalka Toghdeer Maxamed Cumar X. Cabdillaahi Xamarji, Maayarka Degmada Burco, Xildhibaano ka tirsan Golaha Degaanka ee Magaaladda Burco iyo Madax-dhaqmeed, waxaanay Ciyaartoyga kala duwan ee Gobalka Togdheer, waxaanay kula dar-darmeen inay ilaaliyaan aq-laaqda oo ay maanta huwan yihiin magacii Gobalka Togdheer rajeenayaana inay ku guulaystaan koobka Gobalada.
Maayarka Degmada Burco oo ugu horayn halkaas ka hadlay ayaa u mahad-celiyey Xildhibaan Cali Mareexaan oo uu sheegay inuu yahay Xildhibaanka kaliya ee xasuusta halkii laga soo doortay, taas oo uu tilmaamay inuu mar walba garab taagan yahay dhalinyarada Gobalka Togdheer, waxaanu yidhi
“Waxaan u mahad u celinaynaa Xildhibaanka Reer Burco oo ah xildhibaanka ugu mudan Xildhibaanada ka soo baxay Gobalka Togdheer, waana Xildhibaanka kaliya ee dhilintarada Reer Burco caawiya markasta. qofku haddii uu wax wannaagsan sameeyo waxa wacan in isagana lagu tageero adin iyo af-ba, markaa Xildhibaanku aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Xaqiiqatan marka laga hadlaayo markii aanu ka soo ababaxaynay Magaaladda Burco waxa uu ka mid ahaa Xildhibaanka iyo Wasiirka duulistu raggii aynu ku soo xisaab tamaynay weeye. Xildhibaanadii aynu ka soo dooranay Gobalka Togdheer Xildhibaan Cili Mareexan iyo Xildhibaan Wabeeye waxay ka yihiin nambarka kowaad oo waa Xildhibaanka kaliya ee Ummaddii soo dooratay xasuustay ee wax u qabtay weeye. Waayo waa ragg og-meeshii laga soo doortay, markaa waxaanu og-nahay inay labadaas xildhibaan ay heegan u yihiin Gobalka Togdheer horumarkiisa oo aanay meesha oo kaliya ku qaadan mushahar. Madaarkii Burco oo lagu waday dib-u-habayn waxay geyeen lacag ah saddex iyo lixdan kun oo Doollar ayay immika gundoonsiyeen Guddida Madaarka. Waxaan Ciyaartoyga Reer Burco aan kula dar-daarmayaa inay u dulqataan waxkasta oo aanay xanaaqin. waxa jira waxyabao badan Ciyaartoygu kugu samayn-karo.oo anigu Kubada ayaan Ciyaarijiray, markaa waxaan rajeenayaa inaad halkan kala tagtaan guul. Intiina maanta halkan fadhida ayuu dusha ka saran yahay Magacii Gobalka Togdheer oo waxa loo baahan yahay inaad inoo ilaalisaan asuulbta iyo magaca.”
Badhasaabka Gobalka Togdheer Axmed Cumar X. Cabdillaahi Xamarji oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa la sii dar-daarmay Ciyaartoyga Gobalka Togdheer, waxaanu ydih
“Dhamaan waxaan u mahad-celinayaa Dadka Gobalka Togdheer ee sida wacan noo soo dhaweeyey ilaa maalintii aanu nimi halkan, markaa Xildhibaan Cali waxaanu leenahay aad iyo aad ayaanu kaga mahad-celinaynaa. Waxaan kula dar-daarmayaa Ciyaartoyga Gobalkayga waxa la bixinayaa laba Koob. Koob waa koobkaas inoo muuqda. Koobna waa koobka tarabuunka oo ay Madaxdii oo dhami ay fadhiyaan oo meelkasta wataas laga dawanaayo Warbaahinta. Waxa aanu doonaynaa in la yidhaahdo waar Nimanka Gobalka Togdheer ka socday waa niman Odayaal ah oo sharaf leh,”ayuu yidhi Badhasaabka Gobalka Togdheer Axmed Cumar X. Cabdillaahi Xamarji, waxaanu hadalkisii sii raaciyey.
“Waxa aad iyo aad ugu caafimaad qabaa iyadoo la leeyahay guruubkeenu waa guruubkii dhimashada, waxaan filayaa in dhimashada la shegaayo ay tahay saddexda kale ee aanay ahayn Gobalka Togdheer. Anigu waan ku qanacsanahay ee waxaan isleeyahay saddexda kale tolow tiimka idin soo racayaa waa kuma. waxay guushu ku xidhan tahay cagihiina oo maanta intayadaas Madax ah ee Gobalka Togdheer waxa naga magac wayn Ciyaartoygiina u safanaaya Gobalka Togdheer, markaa waxaan idinku dar-daarayaa in wax ceeba iyo wax dareena oo gusha idinka riixa aad iska ilaalisaan oo wax walba aad ka feejigataan ayaa loo baahan yahay. Waayo saaxibaday oo aan ka mid ahaa ee Gobalka Maroodi-jeex waxay ku badisaa khiyaamo, waxaanay ka mid tahay Ciyaarta inaad iska ilaalisaan. garoonka waxa taala xamaasad oo Burco waxa lagu xataa inay xanaaqdo, markaa iska ilaaliya ayaan idin leeyahay.”
Xildhibaan Cili Mareexaan, oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa Ciyaartoyga Gobalka Togdheer u rajeeyey inay ku guulaystaan Koobka, waxaanu yidhi
“Ciyaarihii barigii hore ee Gobalada Soomaaliya watii sannad walba la qaban jiray bisha Julay. Hadday tahay Masuulkastaaba oo Wasiir ah ama Xildhibaan ah waxa uu tageeri jiray Gobalkiisa. Markaa immikana waatii oo un oo Somaliland ah, waxaynu maantana ku wada joognaa 13-ka Gobal ee Somaliland. anagu haddaanu nahay Xildhibaanadii laga soo doortay Gobalka Togdheer waxaanu la soconaa idinka. Haddii halkii laga soo doortay ay tartamayso qasab ayay kugu tahay inaad tageero iyo wixii kasta ee aad qaban-karto, lakiin magaca iyo guushu waxay ku xidhan tahay idinka. Markaa Magaaladda Burco waa meeshii lagu aas-aasay Somaliland oo aadna xamaasadeeda ayaa u badan, waxaana loo bahan yahay inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan. Waxaan idiin rajeenayaa guul.”
Wasiirka duulist oo ugu danbayntii halkaas ka hadlay ayaa la sii dar-daarmay Ciyaartoyga Gobalka Togdheer, guulna u rajeeyey, waxaanu yidhi. “Aad ayaan ugu mahad-naqayaa Ciyaartoyga kala duwan ee Gobalka Togdheer, hadday tahay kuwa cagta iyo kuwa Gobalka. Aad ayaan ugu mahad-celinayaa Xildhibaanada iyo Golaha Degaanka ee Burco sidaad is-kugu duuban tihiin. Gobalka Togdheer caan ayuu ku yahay Kubada oo waa la yaqaanaa ilaa xilligii Soomaaliya. Waxaan idin rajeenayaa inaad guul ka soo hooysaan koobkan.”